xasan kaahiye – Page 2 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Author Archives: xasan kaahiye
Amaanka Muqdisho oo la adkeeyay & 3-xildhibaan oo la dooranayo
January 1, 2017	Leave a comment 37 Views
Waxaa la adkeeyay amaanka xarunta Gaadiidka Booliska degmada C/casiis ee Gobolka Banaadir,halkaasi oo ay maanta Axad ah ka dhaceyso doorashada 3-Xildhibaan oo Aqalka hoose ee Beelaha dega Gobolada Waqooyi. Xubnaha tartamaya waxaa ku jira Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan oo ahayd wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Ridwaan Xirsi Maxamed oo ahaa wasiirkii hore ee Diinta iyo Awqaafta. Guddiga Doorashooyinka ...
Baarlamaanka Somalia oo maanta kulan Xasaasi ku yeelanaya Muqdisho
December 31, 2016	Leave a comment 31 Views
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa iney ku kulmaan magaalada Muqdisho,waana kulankoodii Labaad ay yeeshaan tan iyo markii la soo doortay. Waxaana muhiimada kulanka maanta lagu sheegay in Xildhibaanada ay magacaabaan Guddiga ka shaqeyn doona doorashada madaxweynaha iyo Guddoonka Baarlamaanka. Sidoo kale,Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta shaacin doona waqtiga la qabanayo doorashada Labada Guddoon ee Labada Aqal Baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda,kuwaasi ...
Nin Somali oo si lama filaan xil culus uga helay Qaramada Miboobay
December 31, 2016	Leave a comment 23 Views
Markii hore ugu horeysay Nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Axmed Shire Warsame ayaa loo magacaabay inuu noqdo Agaasimaha La-Tacaalidda Gurmadka Degdegga ah ee Hay’adda Qaxootiga Qaramada Midoobay ee UNHCR. Waa ninkii ugu horreeyey ee Soomaali ah jago sare ka qabta Hay’adda Qaxootiga Qaramada Midoobay ee UNHCR. Wareysi lala yeeshay Mr Warsame ayaa sheegay in wax badan uu ka soo ...
SAWIRO: Maxaa kala qabsaday Musharax Faroole & Geel usoo martiyay
December 31, 2016	Leave a comment 41 Views
Guriga madaxweynihii horre ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Sh Maxamed Faroole ayaa waxaa maanta usoo martiyay Qaalin yar oo geel ah oo aan cidina wadin. Sawiro laga qaaday ayaa muujinaya in geelaan uu kasoo qaxay abaarta ka jirta deegaanada Soomaaliya. Madaxweyne horre Cabdi-raxmaan Faroole ayaa kusii daayay gurigiisa si ay ucunto cagaarka gurigiisa.
Ma Sax Baa In Faarax Sheekh C/qaadir Uu Kahor Yimid M/Xasan Sheekh?
December 31, 2016	Leave a comment 26 Views
Waxaa maalmahan dambe soo baxayey warar sheegayey in Faarax Sheekh C/qaadir uu kahor yimid Xasan Sheekh Maxamuud, islamarkaana uu taageerayo musharraxiin kale oo Damul Jadiid ah. Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo kuna sugan Villa Soomaaliya ayaa soo tabisey in Xasan iyo Faarax ay hadda dib isku fahmeen, islamarkaana meesha laga saarey wax walbo oo mugdi keeni kara. Xasan Sheekh iyo ...
Khatar shan dhinac ah oo soo wajahdey maamulka Puntland.
December 30, 2016	Leave a comment 33 Views
Puntland waxay noqotay laan gebi ka lulatay oo duufaani ligligayso, haddaan dadkii dhistay cayminna waa la isweydiin doonaa. Waxay Puntland eersatay oo isug isugu darsamay aafo shan-madaxley ah: 1. Hoggaan-xumo iyo siyaasad majaro-bawdey oo ay seegtay meekhaankii iyo miisaankii ay Somali ku lahayd. Waxaa isku milmay laameheedii sharciyeed sida madaxweynii, af-hayeenkii barlamaana iyo xeer-ilaalinteedii. Waxaa lagu khasbay inay hayin u ...
Madaxweynaha Soomaaliya oo xarigga ka jaray Isbitaalka Martini
December 30, 2016	Leave a comment 30 Views
Madaxweynaha Soomaaliya oo xarigga ka jaray Isbitaalka Martini Muqdisho, 29 December 2016 – Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xariga ka jaray isbitaalka Martini ee ciidammada Naafada ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho. Wasiirka Gaashaandiga, wasiir ku xigeennada Caafimaadka iyo Gaashaandhiga, Taliyaha Ciidanka XDS iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa ka mid ahaa mas’uuliyiintii ka qeybgashay ...
Xildhibaan farta ku fiiqay Nuuca Musharax mudan in la doorto
Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji ayaa uga digay Xildhibaanada Cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya inay doontaan Siyaasi ay dowlado shisheeye ay gadaal ka riixayaan. Xildhibaan Sakariye ayaa tilmaamay in Baarlamaanka laga sugayo inay doortaan Hogaamiye samata bixin kara dalkan, balse aan loo baahneyn hogaamiye talada dalka u raadsada wadamada Shisheeya ee cadowga ku ah Soomaaliya. Waxa uu intaa ku daray in Baarlamaanka ...
FALANQEYN: Rajo beel ka muuqda wada shaqeynta Aqalada Sare iyo Hoose
December 30, 2016	Leave a comment 28 Views
Madasha Hoggaanka Qaran ayaa war saxaafadeed xalay ka soo baxay ayaa waxay dib u dhigeen magacaabista 18-kii xubnood ee ay ku kordhiyeen Aqalka sare 24-kii bishan, Arinkaan ayaa u eg in Doorashadu Gashay jawareer iyo Muran cusub Waxaa xildhibaanada la dhaariy iyadoo xubnaha madasha intooda badan meesha ka maqan tahay Gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh arinkaa oo ah Fadeexad siyaasadeed ...
LA OGAADAY: Xasan Sheekh Oo Qorshe yaab leh Laga Fashiliyay+Xaalka Oo..
December 30, 2016	Leave a comment 24 Views
Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay Shabakada Wararka ee Baardheere24.com ayaa sheegaya in la fashiliyay isku day la doonayay in loogu shubto codadka xiliga tartanka madaxweynaha. Arintan ayaa la fahansan yahay inuu watay madaxweynaha haatan Xasan Sheekh Maxamuud oo taageero ka helaya gudiga doorashada qaranka iyo xubno dowlada ah. Xogta la helay ayaa muujineysa in maalinta doorashada madaxweynaha ay ...